Himalaya Dainik » गर्भावस्थामा संगीत सुन्नु फाइदाजनक हुन्छ ? यसो भन्छ अध्ययन
गर्भावस्थामा संगीत सुन्नु फाइदाजनक हुन्छ ? यसो भन्छ अध्ययन
गीत संगीत सुन्न कसलाई पो मन पर्दैन र ? आफ्नो मुडअनुसार संगीत सुन्नाले मनमा शान्ति आउने, त-नाव कम हुने तथा स्फूर्ति बढ्ने अनुभव धेरैको होला ।
ध्वनिको प्रभाव एकाग्रता, निन्द्रा, मा-नसिक विकास तथा भाषिक क्षमतामा विकास गराउनेमा हुन्छ। ताइवानको कलेज अफ नर्सिङ, कौसियुङ मेडिकल युनिर्भसिटीले दुई सय ३६ ग-र्भवती महिलाहरूमा गरिएको अध्ययनअनुसार गर्भावस्थामा दुई हप्ता मात्र पनि संगीत सुन्नाले ग-र्भवती महिलाहरूलाई त-नावमुक्त बनाउन मद्दत गर्‍यो ।
गर्भवती महिलाहरूले अनिवार्य रुपमा दुई हप्ता मधुर संगीत, प्राकृतिक चराचुरूङ्गीका स्वरहरू वा मनपर्ने गीतसंगीत सुन्न सल्लाह
ती महिलाहरूले क्लासिकल संगीत तथा प्रकृतिका ध्वनिहरू सुन्ने गरेका थिए । उक्त अध्ययनअनुसार मान-सिक रुपमा त-नाव महसुस गरिरहेका ग-र्भवती महिलाहरूले अनिवार्य रुपमा दुई हप्ता मधुर संगीत, प्राकृतिक चराचुरूङ्गीका स्वरहरू वा मनपर्ने गीतसंगीत सुन्न सल्लाह दिएको छ । तर संगीत कति घण्टासम्म सुन्ने भनिएको छैन ।
त्यस्तै, स्पेनमा गरिएको चार सय नौ जना ग-र्भवतीहरूमा गरिएको एक अर्को अध्ययनले संगीतले ग-र्भवती महिलाहरूको त-नाव (एन्जाईटी) कम गर्ने अनि बच्चाको तौल र छातीको चौडाइ (चेस्ट सर्कम्फ्रेन्स) बढी हुने गरेको देखाएको छ ।
ग-र्भावस्थामा संगीत : एक संस्कार
ग-र्भावस्थामा संगीत सुन्ने नयाँ भने होइन । थाहा भएर वा नभएर पनि ग-र्भावस्थामा भजन तथा विभिन्न किसिमका मेलोडीहरू सुन्ने प्रचलन हाम्रो समाजमा पहिलेदेखि नै रहेको छ ।
विकसित मुलुकहरूमा सन् १९९० तिरदेखि नै ग-र्भको बच्चाका लागि ग-र्भवतीहरूले ‘ओम्व म्युजिक’ अर्थात ग-र्भ संगीत सुन्ने गरेको पाइएको छ । सामान्यतयाः ग-र्भको बच्चा पाँच महिना भइसकेपछि, उनको सुन्ने शक्तिको विकास भई सकेको हुन्छ । त्यसैले गर्भको भ्रूणले पनि २० हप्ताको अवधिपछि संगीत सुन्नसक्ने अनुमान विज्ञहरूको रहेको छ।
ठिक्कको आवाजमा हल्का, क्लासिकल वा मेलोडी तथा प्रकृतिका ध्वनिहरू निश्चित समयका लागि एकाग्र भएर सुन्नु नै उपयोगी
यस अवस्थामा गर्भवती महिलाले गर्भ संगीत सुन्नाले गर्भको बच्चा जन्मिसकेपछि उसको आत्मबल बढ्ने साथै मानसिक विकासमा मद्दत पुर्‍याउने हुन्छ । यसले आमा र बच्चाबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउँछ । यस्ता बच्चाहरू बढी सं-वेदनशील हुने तथा उनको स्नायु प्रणालीको राम्रो विकास हुने विज्ञहरूको धारणा रहेको छ ।
ग-र्भावस्थामा संगीत : एक उपचार
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डा.एलान डि.रेटमेनका अनुसार संगीतलाई गर्भको विभिन्न अवस्थाहरूसँगै प्रसवको अवस्थामा पनि सुन्नु प्रभावकारी हुन सक्छ । संगीतले ग-र्भवती महिलाहरूको तनावहरू मुक्त गर्नुको साथै उनीहरूमा रि-स, रा-ग, द्वे-ष ह-टाउन मद्दत गर्छ ।
संगीतले आमा र ग-र्भको बच्चा दुवैमा थप उर्जा पैदा गर्छ । तर अत्यधिक ठूलो आवाजमा संगीत सुन्नाले नराम्रो असर पनि गर्न सक्छ। त्यसैले सानो वा ठिक्कको आवाजमा हल्का, क्लासिकल वा मेलोडी तथा प्रकृतिका ध्वनिहरू निश्चित समयका लागि एकाग्र भएर सुन्नु नै उपयोगी अनि उपयुक्त सावित हुन सक्छ । अनलाइनखबर/एजेन्सी